Ogaden News Agency (ONA) – Qoraa Caan Ah oo Addis Ababa Laga Masaafuriyay Sababta.
Qoraa Caan Ah oo Addis Ababa Laga Masaafuriyay Sababta.
Posted by Dulmane	/ November 19, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa laga masaafuriyay qoraa caan ah oo dunida kamagac bixiyay.
Sida xogta aan kuhelayno laanta socdaalka ee xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa wadanka Itoobiya ka masaafuriyay Rene Lefort oo ah nin qoraa ah oo dunida siwayn looga yaqaano, sidoo kale qoraaga ayaa lasheegayaa in si anshaxa kabaxsan loola dhaqmay mudadii uu kusugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa.
Rene Lefort ayaa lasheegayaa in uu garoonka Addis Ababa kasoo dagay isagoo kasoo kicitimay magaalada Baris ee caasimada wadanka France, waxaana lasheegayaa in uu qoraagu watay waraaqda dal kugalka oo uu kasoo qaatay safaarada gumaysiga Itoobiya ee wadanka France.
Hase yeeshii shaqaalaha garoonka Addis Ababa oo horaan loogu wargaliyay in qoraagu uuyahay qof qaswade ah isla markaana aan loo ogolayn wadanka Itoobiya ayaa aqoonsaday magiciisa waxayna kaqaateen Baasaboorkii iyagoo ku dhex xabisay garoonka.
Rene Lefort oo ah muwaadin udhashay wadanka France ayaa ah shakhsi siwayn wax uga qori jiray xaalada qasan ee wadanka Itoobiya iyo guud ahaan wadamada saxaraha kahooseeya, sidoo kale qoraaga ayaa maqaalo dhaadheer oo uu qoray ku dhaliilay qaabka uu taliska wayaanuhu uladhaqmo shacabka kacdoon wadayaasha ah ee ree Itoobiya.
Rene Lefort oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baris saxaafada kula hadlay ayaa sheegay in uu wadanka Itoobiya kalasoo kulmay arin argagax leh oo horaan uusan u arag, wuxuuna qoraagu intaas kudaray in wadanka Itoobiya uu u aaday howlo ganacsi isla markaana uu watay waraaqo dalkugal ah oo aysan waxba ka khaldanayn.
Masaafurinta iyo bahdilka lagu sameeyay qoraaga wayn ee udhashay wadanka France ayaa muujinaya cadaalad darada iyo cadaadiska kooxda TPLF ay kuhayso saxaafada madaxa banaan, waxaana lafilayaa in uu qoraagu wax kaqori doono dhaqankii uu Addis Ababa kusoo arkay.